Sophia Kenin Zvekuchecheche Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi
Svondo, Gunyana 27, 2020
Hupenyu Nhau Editors - Yakagadziridzwa zuva: Gunyana 26, 2020 0
Yedu Biography yaMax Verstappen inokuudza Chokwadi pamusoro penyaya yake yehucheche, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Hupenyu Hwemhuri, Hupenyu HweRudo, Net yakakosha, Lifestyle uye Yemunhu ...
Yedu Biography yaMick Schumacher inokuudza zvese Chokwadi chenhau yake yehucheche, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Hupenyu Hwemhuri, Musikana / Wife kuva, Lifestyle uye Pamoyo ...
musha nyika dzakabatana Vatambi Vanotamba Sophia Kenin Zvekuchecheche Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi
Sophia Kenin Biography Chokwadi.
Kutanga kuenda, anonzi "Sonya". Chinyorwa chedu chinokupa chinyorwa chizere cheSophia Kenin Childhood Nhau, Biography, Mhuri Zvikonzero, Vabereki, Upenyu hwepakutanga, Mararamiro, Hupenyu hwepamwe uye zvimwe zviitiko zvakakurumbira kubva paakange achiri mwana kusvika pakuzivikanwa.
Ehe, munhu wese anoziva kuti iye ndomumwe wemazita anofarirwa mune tennis yevakadzi. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezvaSophia Kenin's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezvezve ado, ngatitangei.
Sophia Kenin Nyaya Yechikoro Chemwana:
Nyanzvi Tennis mutambi Sofia Anna "Sonya" Kenin akazvarwa munaNovember 14, 1998. Akazvarwa kuna baba vake, Alexander Kenin naamai vake, Svetlana muguta reMoscow, Russia. Imwe nguva mushure mekuzvarwa kwake, vabereki vaSophia Kenin vakatamira kuUnited States. Alexander Kenin naSvetlana vaimbove vari kuU.S. (New York munopera 1980s) asati aberekwa asi akadzokera kuRussia kwekuzvarwa kwaKenin nekuda kwezvikonzero zvemhuri.
Mhuri yemhuri yaSophia Kenin yaive nesimba rakawanda muhupenyu hwake hwepakutanga. Wakanga uchiziva here, iye pakutanga akarerwa kwete chete nevabereki vake asi nevamwe vemumhuri, chikonzero nei vabereki vake vakasimbisa kuti akazvarirwa muRussia. Sofia anozivikanwa kuve akawana budiriro yakawanda kubva paudiki, semhedzisiro, yekurerwa kwake neanenge wese nhengo yemhuri yake; vanababamunini vake, babamunini, ambuya, gogo, vazukuru etc. Kukurudzira kwakanaka kwenhengo dzemhuri yaSophia Kenin paari kwakatanga kuRussia, ndokuzoenda kuUnited States.
Sophia Kenin Dzinza reMhuri uye Ngano:
Kunyangwe Sofia akaberekerwa muRussia, Iye ndeyechokwadi nyika yeAmerica. Chiizve? iye ane Russian mhuri yakabva uye akakurira muguta rePembroke Pines muFlorida USA. Yakanga iri Florida iyo vabereki vaSophia Kenin vakatamira kune imwe nguva achiri mwana.
Vabereki vaSophia Kenin vaive nemari shoma pavakatanga kuenda kuUnited States, chokwadi ichi chinoreva kuti haana kurerwa mumhuri yakapfuma. Kuitira kuti mhuri irambe ichienda, amai vaSophia Kenin vakatsvaga basa remukoti (izvo zvavakaita kubva panguva yavo muSoviet Union) baba vake vaine basa rekudzidzisa.
Sophia Kenin Upenyu hwepakutanga (Chiono chekutanga naTennis):
Kukura muFlorida, Sofia ane makore matatu okukura akatanga kutamba nemabhora etennis uye mabariketi mushure mekuona baba vake vachitamba mutambo sechiitiko chekuvaraidza. Kuwana kufemerwa kubva kuna baba vake kwakava kutanga kwake kudyidzana naTennis. Muchokwadi, iye aisave mune chero matoyi kana mutambo wevacheche, zvese zvaaida yaive kunge ine tennis bhora uye kutamba tenisi. Zvishoma nezvishoma akagadzira zvimonera zvekushandisa kune tennis zvishandiso uye giya.
Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Parakazosvika Sofia aine makore mashanu, kugona kwake mu tennis kwakange kwatoonekera zvakanyanya kuvabereki vake. Nekudaro, ivo vakachengetedza masevhisi emurairidzi Rick Macci kuti amupe dzidzo yepamberi mumutambo.
Rick achiri ipapo, aisakwanisa kubatsira asi kuyemura kugona kwaSofia mumutambo uyo waakarondedzera se "watobikirwa mukati." Nekuda kweizvozvo, akave akasimba uye akazvipira kumuumba kuti agone kuve tennis prodigy.
Sophia Kenin Makore Ekutanga naTennis:
Kana nguva yacho yaive chaiyo, Sofia wemakore manomwe akatanga kutamba United States Tennis Association (USTA) vasikana 'gumi. Iye akatonga mamakonendi uye panguva yakange iri nhamba yekutanga muNyika yeFlorida.
Nekuita kwake kwakatanhamara, Sofia akawana mukana wekudyidzana uye kurova nevateki vetenisi. Akapa zvakare kubvunzurudza, akahwina mumakwikwi mazhinji Super National Junior Tournaments uye akahwina mumakwikwi eInternet International.
Nzira Yake Yokuenda Mukurumbira Nyaya:
2014 yaive yekutanga yekushandurwa kwebasa raSofia nekuda kwezvikonzero zvakawanda. Raive gore iro uyo aive aine makore gumi nematanhatu paakapa basa rake marekodhi nekuwedzera nzvimbo muTeam USA USA kuma 16 China Summer Youth Olimpiki.
Kwapera gore, Sophia akatora danho rekuti ave nyanzvi nekukunda mumiriri weUSTA junior yenyika muna 2015. Kukunda kwakachengeta Sophia kadhi remusango raakashandisa kumuita Grand Slam kutanga ku 2015 US Open. Nekudaro, akarasikirwa nemutambo wake wekuvhura kumutambo wakakura weSamana kuna Mariana Duque-Mariño.
Rake Kukwira Kumukurumbira Nyaya:
Mwaka wakatevera (2016), Sophia akakunda mbiri yake yekutanga ITF mazita uye akasimuka zvakanyanya kuburikidza neWTA rankings. Akazopedzisira ave nyanzvi muna Nyamavhuvhu 2017 uye akapedza gore rakatarwa Nhamba 108 munyika. Kutenda nekuvandudzwa kwaakaita, Sofia akakwanisa kutamba uye kushandisa mukana wekushanya kwakamubatsira kubudirira kwake.
Muchokwadi, akakunda mana WES singles fainari muna 2019 uye akakundwa Serena Williams pamutambo we3 wegore ra2019 Kuvhurwa kweFrench (chikamu chakakosha cheSophia Kenin's Biography). Mufaro wevabereki vaSophia Kenin kunyanya baba vake vaisaziva miganhu panguva iyoyo vakawana kuzivikanwa kwepasi rose nekurova imba yavanofarira uye nyika Nha. 1 Ashleigh Barty kuhwina 2020 Australia Open. Maizviziva here?… Akava mudiki muAmerican kukunda saimba yevakadzi veSekuru Slam kubvira Serena Williams muna 2002. Vamwe, sezvavanotaura, inhoroondo.
Ndiani mukomana waSophia Kenin?
Hapana kuramba chokwadi chekuti mukurumbira mutsva waSophia wakawedzera fanbase yake. Iyo zvakare yakaendesa vatori venhau kutarisisa nekusimbisa kwehupenyu hwerudo rwake sevazhinji vanoda kuziva kana iye aine mukomana kana asina.
Iye ane makore makumi maviri nemasere wekuroora asina kuroorwa panguva yekunyora uye haana kuzivikanwa kuti akazove nevakomana vakomana munguva yakapfuura. Naiyewo Sophia haana Mwanakomana (uye) nemwanasikana (vakaroora) kunze kwemuchato. Anotarisa pane rake rebasa iro rine tarisiro yekukwidza misoro yakakura.
Sophia Kenin Mhuri Yechokwadi:
Hupenyu hwakanaka uye hwakafanira kuraramira tennis nyeredzi vane hupenyu hwakapfuma hwemhuri senge hwaSophia Kenin. Tinokuunzira chokwadi pamusoro pemhuri yemhuri yaSophia kutanga nevabereki vake.
Nezve amai vaSophia Kenin:
Svetlana ndiye mukadzi anozivikanwa saamai vaSofia. Akasiya Soviet Union muna 1987 nababa vaSofia ndokutamira kuUnited States kwavakanogara kudzamara ave pedyo nekuzvara. Vakadzokera kuMoscow kwakaberekerwa Sophia muna1998 ndokunogara ikoko kwemwedzi mishoma kuti ambuya vake vabatsire nemwana vachangozvarwa. Ivo pavakazodzokera kumatunhu, Svetlana akasimudza Sophia saamai vane rudo uye haana kumbopeta mapapiro ake kubva kubhururuka. Akatsigira nyeredzi tennis munzira yese uye ave kudada nezvaave.
About Baba vaSophia Kenin:
Alexander Kenin ndibaba vaSophia. Akashanda semutyairi wetekisi uye akaita mamwe mabasa asina kujairika munguva yepakutanga yaSophia nechinangwa chekubatsira mhuri yake yakabva kune imwe nyika kuti vazive hope dzeAmerica. Alexander aive asiri baba vaSophia asi murairidzi wake wepuraimari. Akatanga kurova naye munzira yavo yekutanga vasati vachengeta mabasa emurairidzi Rick Macci uyo akamudzidzisa kuFlorida Broward. Alexander ane hukama hwakanaka hwababa nemwanasikana naiye Sophia uyo anomukudza zvikuru.
About Vana vaSophia Kenin:
Sofia ane munun'una mudiki anozivikanwa saAnya uye achiri kuzivikanwa mukoma. Akakura aine mwana mudiki anozivikanwa uyo anobatana naamai vavo mukuva vateveri vake vakuru. Ehe, hatizive nezvezvido zveAnya panguva yekunyora. Nekudaro, mataurirwo aanotaura nechido nezve hanzvadzi yake yemukurumbira anopa inkling yekuti iyewo ane zvido zvekutamba tenisi.
About Sophia Kenin's Hama:
Achitaura nezvehupenyu hwake hwemhuri hwakawedzera, iye chete Sophia Kenin chokwadi chiripo ndechekuti akarerwa zvakare nehama dzake. Sezvo panguva yekunyora, hapana zvakawanda zvinozivikanwa nezve madzitateguru ake uye midzi yemhuri. Uyezve hapana zvinyorwa zvevaSekuru vababa naamai nasekuru nasekuru. Zvimwechetezvo, kuzivikanwa kwamaiguru vake, babamunini, hama dzemukoma, muzukuru uye nanabamunini vachiri kusvika pamhepo.
Sophia Kenin Hupenyu hwepamoyo:
Ndeapi magadzirirwo aSofia's persona uye vateveri vanomuona sei kunze kwematare tenisi? heino chete nzvimbo yakakodzera yekuve sezvatiri kuratidza maitiro ehunhu hwe tennis nyeredzi iyo inotsanangurwa zvikuru neScorpio zodiac chiratidzo.
Iye ane rudo, anesimba, akanaka, ane humboo hwakasiyana hwekuseka uye haawanzo kuburitsa chokwadi nezve hupenyu hwake hwepachivande uye hwega. Kunze kwe tennis, iye ane zvinofarira uye zvekuseredza zvinosanganisira kusangana nevanhu vatsva, kufamba, kuteerera mimhanzi, kuona mafirimu uye kushandisa nguva yakanaka nemhuri yake neshamwari.
Sophia Kenin Mararamiro:
Panguva yekunyora iyi biology yaSophia Kenin, waizviziva here kuti iye ane mutero wakawedzerwa wemadhora zviuru makumi masere zvemadhora? Mari yake yekutanga inowanikwa muhoro uye mihoro yaanotambira yekutamba nhabvu yetenisi uku achiwana mari kubva kumagumo achikurisa hupfumi hwake hunowedzera.
Saka nekudaro, anokwanisa kukwira mota dzemhando yepamusoro zvisinei nekuti anogara mumba memhuri yake kuPembroke Pines kuFlorida. Iye zvakare anonakidzwa nekuve nenguva yakanaka kunzvimbo dzekutambirisa-yepamusoro anonakidzwa nezororo rake.
Sophia Kenin Chokwadi:
Tisati tazvitumidza kuti kuputira pane nyaya yekusununguka kwaSofia Kenin uye biography, hezvino zvishoma-zvinozivikanwa kana chokwadi chisina chokwadi pamusoro pake.
Chitendero: Zvishoma zvinozivikanwa nezve chitendero vabereki vaSofia Kenin vakaita kuti iye ave mucheche. Nekudaro, zvinopesana izvi zviri mukuda kwake kuve mutendi zvisinei nekuti haana kumbobvira aenda zvekunamata panguva yekubvunzurudzwa uye pamusangano wenhau.
Zvipfuwo: Wakanga uchiziva here kuti Sofia Kenin anoda mhuka dzinovarairwa kunyanya imbwa uye dzinowanzotsigira hutano hwavo. Muchokwadi, ane imbwa isina imba inonzi Whitney Houston. Maitiro aanobata peturu kutaura huwandu hwerudo rwaanarwo narwo.
Kusvuta uye kunwa: Nyeredzi yetennis haina kuputa, kana kupihwa kunwa panguva yekunyora. Iye anotarisa pakuchengetedza hupenyu hune hutano sezvaanotarisa maziso ake pakurapa mamwe mazita makuru ehukuru.
Tattoos: Pakupedzisira paSophia Kenin's Biography, tinokupa chokwadi nezve tattoo yake. Like Bianca Andreescu, Naomi Osaka, Caroline Wozniacki uye Simona Halep, mhasuru yemuviri ingangove iyo yekupedzisira ajenda pane tennis nyeredzi zvinyorwa zvezvinofarira sekutaridzika kwake kwakanaka uye kukwirira kukuru kwemamita mashanu ne5 inches zvinoita kuti ma tatoo amubate seisina kukodzera kubereka.
Sophia Kenin Wiki:
Sophia Kenin's wiki zivobase inokubatsira iwe kuti uwane ruzivo nezvake nenzira pfupi uye yakapusa. Tsvaga pazasi;
Zita rizere: Sofia Anna Kenin
Zita rekudanwa: Sonya
Zuva rekuzvarwa: Mbudzi 14, 1998 (zera 21 kubvira waFebruary 2020)
Vabereki: Alexander Kenin (Baba) naSvetlana Kenin (Amai)
Vanun'una: Sista: Anya, Hama: hapana
kukwirira: 1.70 m (5 ft 7 in)
Paunogara: Pembroke Pines, Florida, United States (Ndira 2020 update)
Website yeIndaneti: sonyakenin.us
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Sophia Kenin Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At childhood biography, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!
Feature Image Unhu: "Sofia Kenin ku 2015 US Junior Open"By aifarira kubva kuSmithtown, NY, USA kune marezinesi pasi CC BY-SA 2.0. Iyi faira ine mufananidzo unobviswa wakanzi: Faira: Sofia Kenin (USA) (20803503314) (chirimwa) .jpg.
Serena Williams Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts